दैनिक यसरी ठगिन्छन् यात्रु - sailungonline
भूमिका तिमल्सिना संचारकर्मी
५ पुष २०७८, सोमबार १७:०६ । काठमाडौं
सवारीसाधनको चापले काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा बढ्दै गएको जामलाई कम गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकले धान्नै नसक्ने गरी निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् ।
अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन, भाडामा मनलाग्दी, सवारी चालक र सहचालकको व्यवहारलगायतका कारण पनि निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दर बढाउँदा पनि वैज्ञानिक आधारभन्दा सवारी धनीलाई पोस्ने गरी बढाएको देखिन्छ ।
पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेसँगै भाडा दर बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, सरकारले कायम गरेको भाडदारबाट यात्रु ठगिँदा सरोकारवाला निकाय मौन छन् । जस कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ता हरेक पटक कम्तीमा दुई रुपैयाँ ठगिन्छन् । सरकारले न्यूनतम भाडा दर ४ किलोमिटरको १८ रुपैयाँ कायम गरे पनि सवारीसाधनले भने यात्रुबाट २० रुपैयाँ नै असुल्ने गरेका छन् ।
आइतबार (४ पुस) भक्तपुरबाट काठमाडौैं रुटमा चल्ने बसमा एक जना यात्रु चढे । उनलाई नयाँबानेश्वरमा ओर्लिनुपर्ने थियो । उनले ओर्लिने बेलामा भाडा दिन खोज्दा ब्याँसीबाट कति रुपैयाँ हो भाइ भनेर सोधे । सहचालकले ३० रुपैयाँ भएको जवाफ फर्काए ।
यात्रुले भाडा सूची हेरे । ब्याँसीदेखि नयाँबानेश्वरभन्दा अझ अगाडि बिजुली बजारसम्मको भाडा २८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । ‘भाडा त २८ रुपैयाँ रहेछ नि,’ ती यात्रुले सहचालकसँग प्रश्न गरे । । सहचालक कड्किँदै भाडा ३० रुपैयाँ नै लाग्ने बताए । ‘लागेको भाडा लिएको हो, हामीले बढी लिएका छैनौँ,’ सहचालकले भने ।
सहचालकको रुखो व्यवहार देखेर ती यात्रुले ३० रुपैयाँ दिए र दुई रुपैयाँ फिर्ता मागे । ‘लागेको भाडा माग्ने भए किन ३० रुपैयाँ भनेको त २८ भन्नुपर्थ्यो नि त,’ यात्रुले शान्त हुँदै भने । यात्रुको नम्र बोलीलाई दबाउने गरी ती सहचालक झर्किँदै भने, ‘त्यसो भए खुद्रा पैसा लिएर हिँड्नुस् । कहाँबाट दिनु दुई रुपैयाँ रु बरु तपाईँ मलाई तीन रुपैयाँ दिनुस् म पाँच रुपैयाँ दिन्छु ।’
सोही दिन आइतबार साँझ एक यात्रुले कमल विनायकदेखि दुधपाटीसम्मको भाडाबारे जिज्ञासा राखे । सहचालकले २० रुपैयाँ रहेको जवाफ दिए । तर, भाडा दर सूचीमा १८ रुपैयाँ थियो । अनि यात्रुले प्रश्न गरे, ‘कसरी २० रुपैयाँ रु’ यात्रुलाई जवाफ दिँदै चालकले भने, ‘भाडा त १८ रुपैयाँ हो, तर खुद्रा पैसा नभएर २० रुपैयाँ भनेको ।’
चालकको उत्तरमा यात्रु केही आक्रोशित हुँदै भने, ‘१८ भन्नुस् न त सोझै दुई रुपैयाँ ठग्ने ? एक जनासँग दुई रुपैयाँ ठगेपछि दिनमा सय जना मात्र यात्रु बोक्नुभयो भने त दुई सय रुपैयाँ त सोझै ठग्नुभयो नि, त्यसरी नै महिना र वर्षमा कति ठग्नुहुन्छ ?’
यात्रुको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले चालक केही हच्किए । उनले १८ को सट्टा १५ रुपैयाँ लिएर ‘खुद्रा छैन’ भन्दै पाँच रुपैयाँ फिर्ता दिए । ती चालकले अन्य यात्रुहरूसँग भने सोही अनुसार नै दुई वा तीन रुपैयाँ बढी उठाए ।
यस्तै, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकसहित सार्वजनिक सवारीसाधनमा दिइने सहुलियतमा मनलाग्दी रहेको चाबहिलबाट नयाँबानेश्वर अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी साजन श्रेष्ठ गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार न्यूनतम १८ रुपैयाँ भाडा रहे पनि विद्यार्थीबाट १५ रुपैयाँ सवारीसाधनले लिने गरेको छ । विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम भए पनि यसको लागु भने गरिएको छैन ।
बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत २० असोज २०७८ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको थियो । बाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् ।
केन्द्रीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको हो ।
उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा शून्य किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्म ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटर भन्दामाथि ३५ रुपैयाँ भाडा दर तोकेको छ ।
कसरी निर्धारण गरियो भाडा दर ?
सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा स्वतः यात्रु ठगिने गरी राखिएको यात्रुको गुनासो छ । तर, यसलाई अस्वीकार गरेको छ भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंह बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा विभागले अपनाएको आधारमा नै नियमावलीअनुसार भाडा कायम गरेको दाबी गरे ।
‘भाडा दरको नियमावलीअनुसार नै हामीले भाडा दर निर्धारण गरेका हौँ । सबै इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘भाडा समायोजन गर्दा प्रतिशतको आधारमा बढ्दा अचकल्टो भाडा भयो । अब सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु नै सचेत हुनपर्छ ।’
बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने बताएको सरकारले नयाँ भाडा दर कायम भएदेखि अनुगमन भने गरेको देखिँदैन । कुनै यात्रुले उजुरी गरेमा कारबाही गर्ने बताएर सरकार पन्छिन खोजेको छ ।
‘भाडा मिलाएर दिने होइन भने हामीले ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ, यात्रुले उजुरी गर्नुपर्‍यो नि,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंह बताउँछन्, ‘हामीले कार्ड सिस्टम ल्याउने भनेर यस्तो भाडा दर राखेका हौँ । समायोजन गर्न सकिएन अहिले, तर हामी छिटै नै कार्ड सिस्टममा जान्छौँ, अनि मात्र यो समस्या हट्नेछ ।’
भाडा दर निर्धारणमा सरकारको लाचारीपन : व्यवसायी
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले भाडा दर निर्धारण गरेको तरिका नै गलत भएको दाबी गरेका छन् । यसले गर्दा सहचालकलाई भाडा उठाउन नै असहज भएको तथा दिनेले पनि खुद्रा पैसा मिलाएर दिन सम्भव नभएको उनले बताए ।
‘सरकारको लाचारीपनले भाडा दर र नै अन्योलमा रहेको छ’, उनले भने, ‘देशैभरि एउटै निकायले भाडा दरमा एकरूपता ल्याउन पर्छ । कतै प्रतिशतमा भाडा वृद्धि हुने त कतै किलोमिटरका आधारमा वृद्धि हुने, यो त सरकारको नै कमजोरी हो ।’ सरकारले तोकेको भाडा मात्र लिनका लागि समितिहरूलाई सर्कुलर गरिएको उनले बताए ।
‘उपत्यकामा ५० भन्दा बढी समितिका सवारी साधनहरू गुड्छन् । हामीले सर्कुलर मात्र गर्ने हो त्यसबारेमा नियामक निकायले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने । तर, समितिले आफ्नो सवारीसाधनबाट यात्रु ठगी भए नभएको अनुगमन गरेको छैन ।
बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरेका छौँ : ट्राफिक
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । भाडा वृद्धि भएपछि विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरी परिचालन गरी अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।
१ पुसदेखि अहिलेसम्म ३९ वटा बसलाई बढी भाडा लिएकै कारण कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । सवारीसाधनले बढी भाडा लिएको अवस्थामा तत्काल १०३ मा सम्पर्क गरी सवारीसाधनको नम्बर दिएर गुनासो गर्न यात्रुहरूलाई उनको आग्रह छ ।
कुन ठाउँको भाडा कति छ भनेर जान्नका लागि वेभ साइटमा गएर हेर्ने र तोकिएको भाडा मात्र तिर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरेका एसपी दासले बढी भाडा लिने ३९ सवारी साधनहरू कारबाही स्वरूप प्रत्येकलाई पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिएको बताए ।